SMS ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
SMS ဘာသာစကား သို့မဟုတ် စာတိုပို့ဘာသာစကား သည်အများအားမိုဘိုင်းဖုန်းစာသားကို messaging သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော အီးမေးလ် နှင့် instant messaging ကဲ့သို့သောအခြား အင်တာနက်-based ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသုံးပြုသည့်အတိုကောက် ဘာသာစကားနှင့်ဘန်းစကား ဖြစ်ပါသည်။
SMS ဘာသာစကား၏ ဥပမာ တစ်ခု
ဤ ဆောင်းပါး တွင် SMS language (en.wikipedia) မှ ဘာသာပြန်ထားမှုများ ပါဝင်သည်။
အစောပိုင်း မိုဘိုင်းဖုန်း မက်ဆေ့ခ်ျပို့ ၏အင်္ဂါရပ်များ အတိုကောက်သုံးစွဲဖို့အသုံးပြုသူများကိုအားပေးတယ်။ စာသားမ entry ကိုတစ်ဦးချင်းစီစာတစ်စောင် generate မှသေးငယ်တဲ့ keypad ပေါ်မျိုးစုံခလုတ်နှိပ်လိုအပ်, ခက်ခဲများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများယေဘုယျအားဖြင့် ဇာတ်ကောင် ၁၆၀ ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
၂ ဘာသာပေါင်းစုံတွင် SMS များ
SMS ဘာသာစကားသည် စကားအားဖြင့်တရားစွဲဆိုသောသူတို့ကို မပို့ကြေးနန်းအသုံးပြုသောကြောင့်ဆင်တူသည်။ ဒါဟာ text messaging ၏အာကာသ, အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်အခက်အခဲနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် Ultra-စုံစုံစကားလုံးများနှင့်သဘောထားထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အနည်းဆုံးစာလုံးကိုသုံးဖို့ရှာတတ်၏။ ဤသည်အစောပိုင်း SMS ကိုသာ ဇာတ်ကောင် ၁၆၀ ခွင့်ပြုဘယ်လောက်မှသယ်ဆောင်စ လှေတျတျောတဈခုစီ မက်ဆေ့ခ်ျကိုအဘို့အသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေအားသွင်းစတင်ခဲ့ (နှင့်တခါတရံတွင်လက်ခံရရှိ) ထိုအောက်ပါအတိုင်း။ဤသည်အတူတကွ မက်ဆေ့ခ်ျဖန်တီးခြင်းအတွက် အခက်အခဲများနှင့်စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အတူ သစ်အလတ်စားများအတွက်ပိုမိုချွေ ဘာသာစကားများအတွက်အလိုဆန္ဒကဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားကို SMS ဘာသာစကား အရှင်လျော့နည်းရိုက်ထိုကဲ့သို့သော အတိုကောက်များမရှိဘဲပိုမိုလျင်မြန်စွာ တဦးတည်းတတျနိုငျသထက် ဆက်သွယ်ဖို့ပေးပို့သူခွင့်ပြုထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, SMS ဘာသာစကားများ၏ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း မရှိသောစံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိပါသည်။ မဆိုစကားလုံးတိုစေနိုင်ပါသည်။ စကားများသည်လည်းသူတို့ကိုတိုတောင်းစေရန်နံပါတ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံတွင် SMS များပြင်ဆင်
SMS ဘာသာစကားသုံးသော ပြင်သစ်ကာတွန်း
အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များကို SMS အတွက် non-အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားများနှင့် script များ၏အသုံးပြုမှုကိုမှအဖြစ်အပိုဆောင်းသတ်ကူညီသည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောဘာသာစကားများ၏ anglicization ဖြစ်တတ်ပါသည် – အထူးသဖြင့် non-လက်တင် orthographies တို့အား။
SMS ကိုဘာသာစကား၏ဘာသာစကားနှင့် stylist ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားမှု အများအပြားတည်ရှိပါသည်။
အဘယ်သူမျှမဘုံအတိုကောက်ရှိသည်သောစကားများအဘို့, အသုံးပြုသူများကိုအမြားဆုံးစကားလုံးတစ်လုံးကနေရအက္ခရာကိုဖယ်ရှားနှင့်စာဖတ်သူဟာသရသံ ပြန်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဗျည်းတစ်ဦး string ကိုအနက်ကိုဘော်ပြလိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးပြုံးမျက်နှာအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်ထက်ငေါ့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ကြော်ငြာများတို့သည် SMS ဘာသာစကားကလွှမ်းမိုးခြင်း တိုးပွားလာသည်။ မှတ်မိလွယ်တဲ့နှင့်အာကာသ-saving ဖြစ်သော မက်ဆေ့ခ်ျတိုများကို ပိုအသုံးပြုကြသည်။
↑ Lily Huang (2008-08-01)။ Technology: Textese May Be the Death of English။ Newsweek။ 2011-12-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ History of Short Message Service (SMS)။ Reviews and Ratings of SMS Marketing Services။ Best Text Marketing။ 18 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Exploring the relationship between children's knowledge of text message abbreviations and school literacy outcomes" (23 March 2009). British Journal of Developmental Psychology 27 (1): 145–161. doi:10.1348/026151008X320507. PMID 19972666.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Crystal, David (2009). Txtng the gr8 db8. New York: Oxford University Press။
↑ Thurlow၊ Crispin။ Generation Txt? The sociolinguistics of young people's text messaging.။ Discourse Analysis Online (DAOL)။
↑ López-Rúa, Paula (2007). "Teaching L2 vocabulary through SMS language: some didactic guidelines". ELIA (7): 165–188.
↑ "The Use of SMS and Language Transformation in Bangladesh" (2010).
↑ Mampa Lorna Mphahlele (2005)။ The impact of short message service (SMS) language on language proficiency of learners and the SMS dictionaries: A challenge for educators and lexicographers။ 2012-02-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=SMS_ဘာသာစကား&oldid=481043" မှ ရယူရန်
၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၁:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၁:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။